March 6, 2021 - Xisbiga Qaransoor
War Saxaafadeed: Qaraxii maqaayada Luul Yemeni ee degmada Xamar Jajab
Leave a Comment	/ Wararka / By Xisbiga Qaransoor
Xisbiga Qaransoor wuxuu tacsi u dirayaa dhammaan umada Soomaaliyeed, ehelada iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen illaahay ha u naxariistee dadkii ku geeriyooday qaraxii xalay ka dhacay maqaayadda Luul Yemeni degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Dadkii ku dhaawacmayna illaahay swc caafimaad degdeg ah ha siiyo. “Innaalillaah waa innaa illaahay raajucuun’ Jannada Illaahay haka waraabiyo dhammaan …
War Saxaafadeed: Qaraxii maqaayada Luul Yemeni ee degmada Xamar Jajab Read More »
Press release: Qaransoor party calls for the U.N to release any evidence related to the involvement of Somali troops in the war against TPLF.
War saxaafadeed: Xisbiga Qaransoor wuxuu QM ugu baaqayaa inay soo bandhigaan cadeymaha ciidamada soomaaliya ee ka dagaalamay gobolka Tigreega.
War saxaafadeed: Xisbiga Qaransoor wuxuu soo dhaweynayaa heshiiska laga gaaray Doorashada dalka
Warqada Hambalyada ee Guddoomiyaha Xisbiga Qaransoor Cabdijabaar Sh. Axmed oo ku aadan huska maalinta 15 Maay aasaaskii ururka SYL
‘Haddii aysan caddaalad jirin, Nabad ma jiri karto, maxaa yeelay nabadda waxay ka dhalataa caddaalada’